Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Gas လေမေးခွန်း
လေထရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အမြဲဖြစ်တယ်ဆရာ အစ်မတွက်ပါ
မေးတဲ့သူရဲ့အမ အသက် မသိ။ ရာသီ မသိ။ အိမ်ထောင်ရေး မသိ။ ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလဲ မသိ။ ဘယ်လောက်ကြာ မသိ။
2. Belching လေတက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/belching.html
3. Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-peptic-ulcer_25.html
4. Gastric cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
5. Gastric Juice အစာခြေအရည် http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/gastric-juice.html
6. Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/gastritis.html
7. GERD (1) အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
8. GI Tract အစာလမ်းစစ်ဆေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/gi-tract.html
9. Heartburn ရင်ပူခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
10. Medicine for Diseases of Digestive Tract အစာလမ်း လေနာရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/gastric-cancer.html
11. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer-diagnosis_25.html
12. Peptic ulcer လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html